Maqal: Mushtamaca Reer Puntland oo si diiran u soo dhaweeyay Kediska Ramadaanka SBC – SBC
Maqal: Mushtamaca Reer Puntland oo si diiran u soo dhaweeyay Kediska Ramadaanka SBC
Dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland ee laga dhageysto Cidaacada SBC International ayaa si diiran u soo dhaweeyay Habsami u socodka Barnaamijka Kediska Ramadaanka SBC oo ay Idaacadu ku tartan siiso Bilkasta oo ramadaan Xaafadaa ka kala dhisan Deegaanada Puntland.
Qaar ka mid ah Dadkaas oo SBC la hadlay ayaa sheegay in ay si diiran ugu taageersan yihiin SBC international sida wanaagsan ee ay u soo abaabushay barlaamijkan Kedis aqooneedka ah ayna ku qanacsan yihiin sida cadaalada ah ee ay u wadaan gudiga ugu xilsaaran garsoorka Barnaamijka.
Waxa ay sidoo kale sheegeen dadkan in ay ogyihiin dad ka helay faaiidooyin aad u waaweyn mid aqooneed iyo mid kaleba, dhalinyarada xaafadahana u sameyay isdhaxgal, isbarasho iyo in ay ku mashquulaan Aqoon raadin.
Waxay ugu hambalyeeyeen dadkani SBC iyo Shirkadaha Maalgelinaya, Hirgelinta Barnaamijkan iyagoona ugu baaqayaan in ay halkaasi ka sii wado, mustaqbalkuna noqdo mid heer sare gaara.
Dhageyso Dadkala duwan oo Codkooda ku biiriyay Taageerada Barnaamijka Kediska Ramadaanka ay u hayaan,RIIX AMA DAAR
Sanadkan oo ay SBC u qabatay Barnaamijka Kedis Aqoonedka 16 Xaafadood oo ka kala dhisan Dhamaan deegaanada Puntland ayaa waxa uu noqonayaa sanadkii 7aad oo xiriir ah,